ဗင်းနစ်အီတလီမှာအများဆုံးဖှယျနှင့်မှော်မြို့တသည်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် ရထားအလွယ်တကူ. အီစတာစဉ်အတွင်းဗင်းနစ်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် အားလပ်ရက်, သင်ခံစားနိုငျ သာယာသောနွေဦးရာသီဥတုက. ဒါဟာသင်အိမ်ပြင်တနေ့လုံးဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြု. ရေပေါ်မှာသမိုင်းဝင်စင်တာမှခရီးသွားခြင်း, ထဲမှာယူ ခမ်းနားရှုခင်း ဒါမှမဟုတ်အမြည်း အရသာအစားအစာ ပြီးပြည့်စုံသောအီစတာနားချိန်အတွက်ဗင်းနစ်၏. ဤတွင်အီစတာများအတွက်ရထားဗင်းနစ်ရပုံ.
ဗင်းသည် ရံရေအားဖြင့် သို့သော်ယင်း၏ကျေးဇူးကြောင့်၎င်းသည်ပြည်မကြီးနှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်နိုင်ငံများနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားသည် အကျိုးရှိစွာရထားလမ်း. နှစ်တွေအီစတာအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းဗင်းနစ် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်, နှင့် လေကြောင်းလိုင်းများမကြာခဏသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုတိုးမြှင့် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝယ်လိုအားများ. သို့သျောလညျး, ဗင်းနစ်မှမှန်မှန်ပြေးရထား, ဒီတော့ခရီးသည်တွေဟာမီလန်၊ ထရီဗီစိုနဲ့အဲ့ဒီကနေဈေးသက်သာတဲ့လေယာဉ်ကိုစီးနိုင်ပါတယ်, ရထားယူ ဗင်းနစ်မှ.
ရရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့် ဗင်းနစ် ရထားအားဖြင့်အီစတာချိုးစဉ်အတွင်း. အဓိက မီးရထားဘူတာရုံ, ဗင်နီဇွဲလားစန်တာစီစီယာကမြို့လယ်ခေါင်အစွန်အဖျားနေရာတိုင်းကိုခြေကျင်ဖြင့်သွားလာရန်သို့မဟုတ်ရေကြောင်းဘတ်စ်ကားဖြင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်. ဤသည်ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံနိုင်ငံအများအပြားနှင့်အခြားအီတလီမြို့ရွာနှင့်အတူမြို့ကိုဆက်သွယ်.
နောက်ထပ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာဗင်နီဇွဲလား - မစ်ထရာဘူတာသို့ရထားဖြစ်သည်. ဤသူသည်သင်တို့ကိုသင်တို့ရှေ့မှာမြင်သောပထမဦးဆုံးမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်ပါသည် တံတားဖြတ်သန်း သောလှပသောဂွအထိချဲ့. Venezia-Mestre ဘူတာကိုအနီးဆုံးမြို့များမှရထားဖြင့်သွားနိုင်သည်.
အစောပိုင်းစာအုပ် – အီစတာအတွက်ရထားဖြင့်ဗင်းနစ်
ဖြစ်ရပ်များ နှင့်ပွဲတော်များကိုဗင်းနစ်ရှိအီစတာအားလပ်ရက်များ၌ကျင်းပသည်. သင့်ရဲ့စီစဉ်ခြင်းနှင့်စာအုပ်ဆိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကြိုတင်မဲအတွက်ရထား.
သငျသညျရှေ့တျော၌ဗင်းနစ်အတွက်အီစတာကျင်းပပြီ? ကျွန်တော်တို့ကိုတွစ်တာပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ @SaveATrain! နှင့် အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-to-venice-by-train-for-easter%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
အီစတာ ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား